အိမ်စာ လုပ်သမျှ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » အိမ်စာ လုပ်သမျှ	29
Posted by Munetez on Jul 21, 2012 in Photography | 29 comments
သည်တပါတ် အိမ်စာ လုပ်တဲ့အထဲက
ဘာတွေလုပ်ထားလဲ ဆိုတာလည်း တခါတည်း တွဲတင်လိုက်ပါတယ်ဗျ…
has written 274 post in this blog.
View all posts by Munetez →	Blog
Khaing Khaing says: ဟမလေး မေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက်သွားတယ်တော့ …….. ရာရာစစ ကျုပ်က ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်ပြီး ရိုက်စရာလား ……. အွန်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4596
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့် ..
ဘီဖိုးနဲ့ အာဖတာ ဘာကွာသတုံး သိဒေါ့ဘူး ..
ကျနော့်အထင် ဘာမှ ကွာဝူးးးးးး
တူတူဘဲ .. :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5601
Solid_Sn@ke says: ဘာကွာသလဲကြည့်တတ်ရင် …
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီတစ်ခါ
ခက်သဗျ … အဟီးးးး :D
ပထမပုံမှာ ကိုကမ်းကြီး ပြောသလိုဆို
မှည့်ခေး ပျောက်သွားဒါဘဲ မြင်ဒယ် ..
မျက်နှာလေးနဲ့ အင်္ကျီလေးက ပိုဝင်းလာဒယ် ..
အမည်းတွေ မပါဒေါ့ဘူး .. ပိုလှသွားဒယ် ..
နောက်ဆုံးပုံကျတော့ ကြည့်တတ်တော့ဘူးရယ် …
လတ်လတ် says: ဘီဖိုးနဲ. အာဖတာ စာလုံးပေါင်းကွာပါတယ်ကွယ် သွပ်သွပ်သွပ်…..
ဘီဖိုးနဲ.အာဖတာကြည့်ပြီး ဒဒွေးဒွ မြိုချနေရတယ် ကွယ်…… :D
Khaing Khaing says: ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဘာကွာလဲ သိပ်မသိသာဘူးရယ် ……. ကိုယ်လုံးနားမှာ နည်းနည်းပြင်ထားသလားပဲ ……..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9964
မောင်ပေ says: လေးမွန်ထွေးမွန်လေးတွေ ပါလား
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 703
marblecommet says: အော် အော် …..
ဂီတို့ အိမ်စာလုပ်တယ်ဆိုတာ ဒလိုဂိုး
ဘဖိုး လည်း ကြိုက် အပ်ဖတား လည်း ကြိုက်….
ဒါနဲ့ ဟိုကလေးမ ရင်ဘတ်က
မှည့်လေး ကို ဘာလုပ်လိုက်ထှာလဲဟင်…စ်စ်စ်စ်….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 120
metallic says: ဗိုက်က အတွန့်လေးတွေကြိုက်တယ် (အကျီင်္ကိုပြောဒါ)
ခပ်တိမ်တိမ်ပဲတွေးတက်တော့ ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာပဲသိတယ်း-)
MaMa says: အိသဒ္ဒါမိုးလေးကို ရည်းစားစာရေးတဲ့ ပိုစ့်ထဲမှာ ၀က်ခြံဖျောက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုးးးးးးးးးးးးး
နံပါတ် ၃ ပုံလေး ကြိုက်တယ်။
ဒီလိုသာ Retouch big frog နဲ့တွေ့လိုက်ရင် ငါတို့မြန်မာ မင်းသမီးတွေလည်း ကိုရီးယားမင်းသမီး ရှုံးလောက်ပါတယ်။ :D
(တိုးတိုးတိတ်တိတ် လူစုံတုန်း ပြောရဦးမယ်။
big frog ဆိုတာ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ဖားသက်ပြင်းလို နားထောင်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3121
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဟုတ်ဘူးလေ ဆရာလေးရဲ့ ( မယ်သီလကိုပြောတာဟုတ်ဘူး :D )
( ကျုပ်တို့ရွာမှာ ကလေးတစ်ယောက်မွေးရင် ကိုရင်လား မယ်သီလ လား လို့မေးတဲ့အလေ့ထလေးတစ်ခုရှိသဗျ )
ဒီလိုပုံတွေကို ဒီလိုပျထားတော့ ကျုပ်တို့က ဘာလုပ်စားရမှာလည်း
ဆရာလေးအနေနဲ့ ပညာပေးလိုတဲ့ သဒ္ဓါစိတ်ကလေးရှိရင်
မူရင်း ထမင်းမစားမီ ပုံကို ထမင်းစားပြီး ပုံဖြစ်အောင်
ထမင်းဘဂံဂို ဒီလို လျှက်ရဒယ်
နည်းနည်းပါးပါး ပညာပေးလေးဘာလား ရေးပေးဘာလား
Solid_Sn@ke says: ကဲပါလေ…
အတည် တခုလောက်ပြောပါရစေဗျား …
သည်ပိုစ့်က ပိုစ့် ၂၀၀ ပြည့်တဲ့ပိုစ့်ဖြစ်ပါတယ်…
အခုလို ပိုစ့်၂၀၀ ရောက်တဲ့အထိ ရေးဖြစ်သွားအောင်
အားပေးကြတဲ့ …. ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ ညီလေး ညီမလေးများ
အပေါင်းကို ကျေးကျေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်…
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ပါဦးမယ်…
ပြီးတော့ …နည်းနည်းဆက်လက်ပြီး… လေ့လာချင်ပါသေးတယ်…
အဲသည့်အတွက် စာရေးမယ့် အချိန်တွေထဲက ယူဖို့ ဖြစ်လာပါကြောင်း…
ကြောင်ကြီး says: အဲဒီ့ပုံတွေကိုပဲ အဝတ်မဝတ်မှီနဲ့ဝတ်ပြီး အိမ်စာလုပ်ကြည့်ပါလား။ ကြည့်မိသူ ရွာသားအပေါင်း ထောင်လိုက်မည့်ဖြစ်ခြင်း..လက်မ….။ :eek:
မောင်ပေ says: ပထမ b4 နဲ့ after ကို အဖြေတွေ့ဘီ
မှဲ့လား အမှတ်လား အနာရွတ်လားမသိဘူး
အဲဒါကို after မှာ မတွေ့ဝူး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3383
အရီးခင်လတ် says: မောင်ဂီ
မိန်းကလေး တွေ က လှလဲလှ၊ ချစ်စရာလဲ ကောင်းတယ်။
နှစ်ရာပြည့် မှာ အချောလေးတွေ နဲ့ပေါ့။
ဂုဏ်ယူပါတယ် မောင်ဂီ ရေ။
ဒီ တစ်ခါတော့ ထင်ထင်ရှားရှား ကို တွေ့တယ်ဟေ့။
Before မှာ ဘာစာ မှ ထိုး မထားဘူး။
After မှာ တော့ ငှက်ကြီး နဲ့ ဖားကြီး ရဲ့ ကြော်ငြာတွေ ဝင်ထားတယ်။ :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2271
htoosan says: ရှေး အဖိုးကြီးတွေကို မျက်မှန် ပါဝါတက် ကျီးပေါင်းတွေ တက်အောင် တယ် လုပ်သကိုး ..
သြော် … သုခ ..သုခ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 424
Crystalline says: ခြောက်ပုံမြောက် B4 & After ကတော့ ဘယ်ဖက်ရင်ညွန့်ကအမည်းစက်ပျောက်သွားတယ်. မျက်နှာပိုဝင်းလာတယ်..လက်ခုံရိုးလေးနည်းနည်းပြည့်သွားတယ်.. ပညာရှင်မျက်စိနဲ့ဝေဖန်ပေးတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1590
Moe Z says: bog ဆိုတာကို UK က slang အနေနဲ့သုံးရင် toilet တဲ့
ဆိုတော့ retouched by က toilet ထဲက ဖားလားဟင်င်င်ိစိတ်မထိခိုက်သွားနဲ့ဦးနော်.. နောက်တာ အတည် :P
Solid_Sn@ke says: ဘာ တွိုင်းလက်ထဲက ဖားလဲ…
Moe Z says: ငိုချင်ရင် ဒီလိုငိုသိလား အားရပါးရငို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1074
Wow says: B4 & After က တစ်ခုခုကို စပယ်ရှယ်လိုက် လုပ်ထားသလိုပဲနော်… အရှေ့အလယ်ပိုင်းများလား :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 24
ဆယာလေး ( အော်စကာ ) အထီး says: ဒီလို အိမ်စာလေးတွေ များများ တင်ပေးပါခင်များ
water-melon says: ဟယ် ဟယ် ကြိုးပျောက်တွေပါလားတော်
အနော်က ဂျာပန်မဆို စိတ်ဝင်စားတယ်
သန်းထွဋ်ဦး says: ကိုဂီ လက်ဆော့ထားတဲ့ ပုံတွေကလဲဗျာ။အိမ်စာများများသာပေးပါဗျို့ လို့ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 48
ဘုဂလန့်် says: ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ပလာချတာဂျီးကပ်ထားဒယ် အာဟိ
Moe Z says: အငြိမ့်မင်းသမီးက ဗီဗာဟိန်းဖြစ်ရမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5601
Solid_Sn@ke says: ဘာကျောရာလဲဟင်
Moe Z says: အဟိ.. ရတနာသိုက်နဲ့လွဲသွားတယ်
ဗျို့ .. အူးလေးအံချာဒုံး ဒီမှာလာဖတ် :D
Solid_Sn@ke says: မသိဇိတ်ထဲက ဘယ်လောက်တောင် စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတယ်မသိ..